ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော် မြေကြီးပေါ်တွင် ပေါ်ထွန်းပြီ | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
၁၃ ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော် မြေကြီးပေါ်တွင် ပေါ်ထွန်းပြီ
စစ်မှန်သော အနန္ဒတန်ခိုးရှင်ဘုရား၊ ရာဇ ..ပလ္လင်ပေါ်ကရှင်ဘုရင်
စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုး၊လူအပေါင်းနှင့် တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကို ကြည့်နေသည်
စကြဝဠာ ရှိအရာအားလုံး၊ မြင်တွေ့ကြလိမ့်မည်
နေရာတိုင်းမှ သက်ရှိအားလုံး မြင်တွေ့မည်
တောင်တန်း၊ မြစ်၊ မြေပြင်၊ ပင်လယ် နှင့် အင်းအိုင် သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံး
သူတို့ ၏ ကန့်လန့်ကာကိုဖွင့်ကာ ပြန်လည် လန်းဆန်းလာသည်
ဒါမှမဟုတ် အညွှန့်များဟာ မြေဆီမှအလင်းရောင်သို့တိုးထွက်လာသလို
အို. ဤကမ္ဘာ စစ်မှန်သောတစ်ဆူတည်းသောဘုရား ပေါ်ထွက်လာပြီ
ဘယ်သူကများ သူ့ကို ဆန့်ကျင် ရဲမလဲ
အားလုံးဟာ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကာ လက်ခံယုံကြည်ကြလေပြီ
သူတို့ သူ၏ ခွင့်လွတ်ခြင်းရရန်
အဆက်အပြတ် အသနားခံနေပုံကို ရှုမြင်ကြ။
တိုက်ကြီးများနှင့် ပင်လယ်၊ တောင်တန်း၊ မြစ်များ အရာအားလုံးတို့သည်
နွေဦးရဲ့ လေပြေဟာလည်း မိုးဖွဲလေးများကို သယ်ဆောင်လာသည်။
လူတွေလိုဘဲ စမ်းချောင်းစီးကြောင်းသည် ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရောနှော …အို..လယ်..အို..လယ်..
ပြစ်တင်ခြင်းများ နောင်တများ နှင့်အတူ သူတို့ ငိုကြွေးလေသည်
မြစ်၊ အိုင်များ၊ လှိုင်းတပိုးများ၊
အားလုံးသီချင်းဆိုကာ ဘုရား၏ သန့်ရှင်းသောနာမကို ချီးမွမ်းသီဆို
စာတန် ညစ်ညမ်းစေသော ဟောင်းနွမ်းသည့် အရာတစ်ခုစီတိုင်း အသစ်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်
ပျက်စီးခဲ့သော အရာအားလုံး ပြောင်းလဲကြမည်
အသစ်သော အခြေနေသို့ ဝင်ရောက်ကြလိမ့်မည်
အို. ဤ(ကမ္ဘာ)လောကတွင် စစ်မှန်သောတစ်ဆူတည်းသောဘုရား ပေါ်ထွက်လာပြီ
ဘယ်သူကများ သူ့ကို ဆန့်ကျင်ရဲမလဲ
ပလ္လင်တော်မှ ချိုသာသော အသံလာကာ တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကို ကြေငြာ
ထိုအချိန်သည် ရောက်ရှိလို့လာနေပြီ နောက်ဆုံးအဆုံးသတ် ရောက်လို့လာပြီ
ဘုရားစီမံခန့်ခွဲခြင်းအစီအစဉ် ပြီးဆုံးပြီ သူနိုင်ငံတော် မြေပေါ်ရောက်လို့လာပြီ
ကမ္ဘာ့တိုင်းနိုင်ငံအားလုံး ဘုရားရှင်၏ နိုင်ငံတော် ဖြစ်လာပြီ အာ….အာ…
ပလ္လင်တော်မှ ခရာခုနှစ်ခုသည် အသံထွက်ပေါ်လာသည်။
အံ့ဖွယ်အရာများ ယခု ဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်။
ဘုရားသခင်ဟာ သူ့အသံကြားတဲ့ သူ့လူတွေမြင်ရတာ ဝမ်းမြောက် နေသည်
သူတို့ဟာ မြေပြင်၊ တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးမှ စုဝေးကြသည်
လူအားလုံး စစ်မှန်သောဘုရားကို သူတို့နှုတ်ဖျားတွင်ရှိနေသည်
ကမ္ဘာကို စစ်မှန်သောဘုရား အကြောင်း သက်သေခံ
နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ၌ ပေါ်လာ၏ စာအုပ်ထဲရှိ “အခန်း ၃ ၆” အစအဦး၌ ခရစ်တော်၏မိန့်မြွက်ချက်များ ကို ကောက်နုတ်၍ ဆီလျော်စွာ ပြုပြင်ထားသည်။
အရှေ့သို့- ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်သည် အရှေ့အရပ်မှ ထွန်းလင်းတောက်ပ၏